कोशी उच्च बाँध किन बनाउन दिने ?
भारतले कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो उच्च बाँध निर्माण भयो भने ७५ हजार स्थानीयवासी बिस्थापित हुनेछन् भने बनजंगल, बन्यजन्तु, अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन बिनष्ट हुनेछ । नेपालमा थप बाढी पहिरोको जोखिम त बढ्छ बढ्छ, लाभ भारतलाई हुनेछ, नेपाललाई नोक्सानमात्र ।
तत्कालीन शासकलाई हातमा लिएर सन २०१२ देखि नै भारतले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर डीपीआर तैयार गरिसकेको छ ।
२६९ मिटर अग्लो अर्थात ८८३ फिट अग्लो यो कोशी उच्च बाँध बाँधेर नेपालले जेजस्तो बिपद भोगिरहेको छ, के अझै विपदलाई निम्तो दिने ? हामी आफैले आफैमाथि घात गर्ने ? नेपाललाई पानीको दह बनाएर फेरि मधेसलाई मलेरियाको क्षेत्र बनाउने ? विज्ञ, विशेषज्ञ र आम जनतालेसमेत भारतले जतिसुकै दबाब दिए पनि कोशी उच्च बाँध बनाउन नेपालले अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने छ । यो सुझाव, आवाजलाई पनि नसुन्ने हो भने केको लोकतन्त्र ?
भारतले नेपालसँगको १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्न नसकिने सन्देश दिइसकेको छ । प्रवुद्ध नामको संस्थामार्फत भारतले नेपाललाई खेलाएको छ । नेपालका प्रवृद्ध भनिनेहरुले भारतसँग नेपालले १९५० को सन्धि खारेज गर्नै चाहेको हो, नेपालले यसखालको सन्धि खोजेको हो भनेर प्रष्टसँग नेपाली अपेक्षा, आकांक्षा राख्न सकेन । उल्टै भारतीय प्रवुद्धहरुले नेपालाई धम्क्याइरहेका छन् । नेपाली प्रवुद्ध भनिनेहरुले नेपालको पक्षमा बोल्ने र परिआए त्यो समूह नै परित्याग गर्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ । होइन भने केको प्रवुद्ध समूह, भारतवादी समूह भने भैहाल्यो ।
डा.भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको प्रवुद्ध समूहमा रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतले कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न दबाब दिएको खुलासा गरिसकेका छन् । तर डा.भेषबहादुर थापा मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेझैं फेरि राजदूत हुन पाइन्छ कि भनेर जिब्रो चपाइरहेका छन् । यस्ता पनि प्रवुद्ध समूह हुनेरहेछन् ।
कोशी, गण्डकी, टनकपुरसहितको महाकाली सन्धिले थिचिएको नेपाललाई अव उच्च कोशी बाँधले थिच्ने र डुबाउने भारतको साजिसलाई समयमै बुझ्नु बेश, अन्यथा अर्को २ सय वर्षसम्म नेपाल भारतको दबदबामा रहनेछ ।